Oromo Free Speech: Shirri Filmaata Sobaa Wayyaaneen Deema Jiru,Godina Lixa Shaggar Aanaa Meettaa Roobii Keessatti FDG Kaase,Manneen Barnootaa CufamaniiOromoonni Hedduunis Hidhaman.
Shirri Filmaata Sobaa Wayyaaneen Deema Jiru,Godina Lixa Shaggar Aanaa Meettaa Roobii Keessatti FDG Kaase,Manneen Barnootaa CufamaniiOromoonni Hedduunis Hidhaman.
Gabaasa Qeerroo Lixa Shaggar Ebla 07,2015
Gaafa Ebla 5,2015 Godina Lixa Shaggar keessa itti shira filmaata sobaa Wayyaaneen wal qabatee adeema jiru ,Aanaa Meettaa Roobiitti FDG uummataa fi dargaggootaa barattoota Oromoon jabatee itti fufuun manneen barnoota cufaman,duulli hidhaas uummata Oromoo irratti jabaatee itti fufuu Qeerroon naannicha irraa gabaasa.
Mootummaan Wayyaanee torbaan darbe keessa Godina Shaggar Lixaa Aanaa Meettaa Roobiitti ummatni dirqamaan waggaa 25ffaa Dh.D.U.O akka kabajuuf mana mana irra deemee karaa dabballoota isaan uummata doorsisaa ture. Ummatni kabaja ayyaana kanaa guutummaatti lagannaan konkolaataan ummata geejjibu tajaajila ummata dhaabee milishoota isaa akka geejjibuuf dirqisiisaa ture. Ummatnis tajaajila geejjibaa dhabuu hin qabnu jechuun mirga isaaniif yommuu mormatan konkolaataan kamuu Aanaa Meettaa Roobii keessaa gara biraatti akka hin baane dhoowwaa turan. Dhumarratti dabballootni mootummaa Wayyaanee walga’ii taa’uun namni tokko sa’aa 12:00n booda karaa irratti argamnaa rasaasaan akka rukatamu dhaamsa ajaja dabarsanii turan.
Kuni kanumaan osoo jiruu gaafa Ebla 4,2015 Aanuma kana Magaalaa Eelaa jedhamtu keessatti diddaa sirna mootummaa Itiyophiyaa (Wayyaanee) gaggeessuuf uumata gurmeessitaniitti jechuun hidhaatti nama guuraa jiru. Namoota yeroo ammaa Waajjira Poolisii Magaalaa Eelaatti argaman keessaa muraasni;
13.Isiyaaq Damee fi kanneen biroo yommuu ta’an Namoota ja’a immoo gara biraatti dabarfaman keessaa muraasni;
4.Dirribaa Tsaggaayee fi warra maqaan hin qaqqabin biroo turan. Haala kanaan Barattootni Mana Barnootaa Eelaa Amuumaa Sad.1ffaa fi Mana Barnootaa Meettaa Sad.2ffaa achuma Magaalaa Eelaa keessatti argaman, barattootni hidhaman hanga gadi nuuf dhiifamanitti gaaffii mirgaa gaafachuu itti fufna jechuun barnoota dhaabaniiru. Haaluma kanaan ummata nagaan mana isaa jiraatu ABO manatti olkeessanii sooraa jirtu jechuun manneen namootaallee akka sakatta’aman taasisaa jiru.
Posted by Oromo firee speech at 6:50 AM